Se-Semalt को साथ E-A-T SEO
E-A-T के हो?
E-A-T को महत्व
डिमाइस्फिफाई गर्दै E-A-T & SEO सम्बन्ध
कसरी पहिचान गर्ने यदि तपाइँको वेबसाइट E-A-T अनुसरण गर्दछ?
Semalt लिनुहोस् एसईओ सुधार गर्नको लागि E-A-T प्रदर्शनमा
E-A-T SEO मा अवधारणा हो जुन गुगलमा उच्च श्रेणीकरण गर्ने मार्गलाई सरल बनाएको छ। यस अवधारणामा, ई विशेषज्ञताको लागि हो, आधिकारिकताको लागि एक, र विश्वव्यापीताको लागि टी।
Google बाट E-A-T को महत्त्वको बारेमा पुष्टिकरण फेब्रुअरी २०१ 2019 मा आएको थियो। त्यस बेलादेखि, विश्वभरका SEO प्रदायकहरूले यसलाई उनीहरूको SEO रणनीतिमा समावेश गर्न बिर्सदैनन्।
तपाईलाई थाहा छ E, A, र T अक्षरहरु यस कन्सेप्टमा कस्तो देखिन्छ। आज, यो तपाईंको पैसा वा तपाईंको जीवन (YMYL) साइटहरूको लागि आवश्यक छ।
सर्त विशेषज्ञता, आधिकारिकता, र विश्वव्यापीताको अर्थ के हो पत्ता लगाउनुहोस्:
विशेषज्ञता शब्द भनेको कुशल हुनु वा एक विशिष्ट क्षेत्रमा ज्ञानको उन्नत स्तर हुनु हो। तपाईंको सामग्री प्रतिबिम्बित गर्दछ कि एक विशेषज्ञ यो बनाएको छ।
कुन वेबसाइटसँग सामग्री छ वा कुन कम्पनीसँग सम्बन्धित छ भन्नेले केही फरक पार्दैन। यदि सामग्री मूल्यवान छ र विशेषज्ञता प्रतिबिम्बित गर्दछ, गुगलले पुरस्कृत गर्दछ।
यदि तपाईंको वेबसाइटमा अधिकतम सामग्री गफ वा हाँसोको वरिपरि फेर्दछ भने, त्यसपछि विशेषज्ञता आवश्यक छैन। यदि तपाईं कानूनी, वित्तीय, वा स्वास्थ्य/चिकित्सा सम्बन्धित सामग्री सहितको साइट चलाइरहनु भएको छ भने, निश्चित गर्नुहोस् कि यसले विशेषज्ञता झल्काउँछ।
प्राधिकारिकता द्वारा, Google ले तपाईंलाई एक अधिकार वा अन्य उद्योग विशेषज्ञहरूको बीच प्रतिष्ठित कोही हुन अपेक्षा गर्दछ।
तपाईले आधिकारिकता पनि ज्ञानको मार्गनिर्देशक स्रोत वा/र बिषय सम्बन्धी जानकारीको रूपमा बुझ्न सक्नुहुन्छ। आधिकारिकता तपाईंको सामग्री सिर्जनाकर्ताहरूको विशेषज्ञताबाट आउँदछ।
तपाईंको वेबसाइटमा पृष्ठहरूमा फोरम वा समुदाय छलफल समावेश हुन्छ, कुराकानीको गुणले अधिकारको प्रतिध्वन गर्दछ।
विश्वस्तता भनेको तपाईंको साइट र यसमा सामग्री वैध, पारदर्शी, र सही हो। तपाईंको वेबसाइट एक विश्वसनीय स्रोतको रूपमा देखा पर्दछ।
कम्पनीको वेबसाइट र यसका सामग्री निर्माताहरूले सिर्जना गरेको भरोसाले अधिक यातायात ड्राइभ गर्दछ, र सम्भावित ग्राहकहरूको संख्या पनि बढ्छ। eCommerce कम्पनीहरु यसबाट राम्ररी परिचित छन्।
यो सामग्री वा प्रयोगकर्ताको अनुभव हो, तपाईंको वेबसाइटसँग सम्बन्धित सबै कुराले आगन्तुकहरूलाई उनीहरू सुरक्षित साइटमा भएको महसुस गराउनु पर्छ। तपाईं SSL प्रमाणपत्र स्थापना गरेर सुरू गर्न सक्नुहुनेछ र निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको वेबसाइटले हाम्रो बारेमा, हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्, र विश्वास निर्माण गर्ने अन्य पृष्ठहरू छन्।
एक आम विश्वास यो हो कि Google को क्वालिटी राटरहरू द्वारा प्रदान गरिएको दिशानिर्देशहरूले वेबपृष्ठको र determine्कन निर्धारण गर्दछ। ठिक छ, यो पूर्ण सत्य होइन।
E-A-T निर्धारण गर्दछ कि वेबसाइट प्रयोगकर्ताहरूको लागि मूल्यवान छ वा छैन। गुगलको क्वालिटी राटरहरूले E-A-T विचार गर्दछ जबकि साइट वा वेबपृष्ठले कति मूल्य प्रदान गर्दछ।
तिनीहरूले देख्दछन् कि यदि प्रयोगकर्ताहरूले एक उन्नत अनलाइन अनुभव प्राप्त गर्दछन्, र सामग्री तिनीहरूको मानकहरू अनुसार पign्क्तिबद्धमा छ। अर्को शब्दमा, जब क्वालिटी राटरहरूले भेटे कि प्रयोगकर्ताहरूले सहजै पढ्न, सेयर गर्न, र सामग्रीको एक टुक्रा सिफारिस गर्न सक्दछन्, वेबपृष्ठ वा वेबसाइट समावेश भएको सामग्री अधिक E-A-T मैत्री बन्छ।
E-A-T कारण यो हो कि प्रयोगकर्ताहरूलाई यसको प्रतिस्पर्धीहरू भन्दा साइट छनौट गर्न निर्देशन दिन्छ। E-A-T ले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ कसरी Google ले सामग्रीलाई स्वीकार गर्दछ, र यसैले वेबसाइट वा वेबपृष्ठहरूलाई खोजी परिणामहरूमा उच्च पद प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ।
E-A-T SEO वेबसाइटहरू मध्ये एक हो जुन एक वेबसाइटको स्तर निर्धारण गर्दछ। यस अवधारणाले सामग्रीलाई प्रयोगकर्ताहरूका लागि मूल्यवान बनाउँदछ, यो मौलिक रूपमा मानव अवधारणा हो।
कसरी गुगलले E-A-T बुझ्न सक्दछ र, त्यसमा आधारित भएर, वेबसाइटको श्रेणी सुधार गर्न सक्दछ?
धेरै मानिसहरूले बुझ्छन् कसरी खोजी एल्गोरिदम काम, तर उत्तर छैन जब यो E-A-T को बारेमा छ। त्यस्ता सबै प्रश्नहरूको जवाफमा, गुगलले E-A-T कसरी बुझ्दछ भनेर बुझ्न तीन चरणहरू छन्।
चरण 1: खोजी ईन्जिनियरहरूले खोजी एल्गोरिथ्म ट्वीकमा खोजी परिणामहरूको गुणस्तर सुधार गर्दछ।
चरण २: ट्वीक द्वारा फेला परेका परिणामहरू एल्गोरिदम खोजी गर्नका लागि क्वालिटी राटरहरू मूल्या for्कनका लागि पुग्छन्। तिनीहरू, तब, परिवर्तनहरूको बारेमा प्रतिक्रिया प्रदान।
चरण:: यस प्रतिक्रियाको आधारमा, गुगलले निर्णय लिईएको चिह्नहरूले सकारात्मक परिणाम वा नकरात्मक प्रभाव पार्छ कि हुँदैन भन्ने निर्णय गर्दछ। यदि ट्वीकले सकारात्मक नतिजा ल्याउँदछ, गुगलले त्यसलाई लागू गर्दछ।
र, यही कारणले ई-ए-टी अवधारणासँग मिलाइएको सामग्री खोजी परिणामहरूमा उच्च स्थानमा छ।
यो--चरण वैज्ञानिक प्रक्रियाले गुगल ईन्जिनियरहरूलाई ई-ए-टीको साथ प al्क्तिबद्ध गर्न र र्याकिंग एल्गोरिदममा आवश्यक समायोजनहरू गर्न स understand्केत गर्दछ।
यस प्रक्रियाको विवरण राम्रोसँग बुझ्नको लागि, तपाईं यस मार्फत जान सक्नुहुन्छ कठोर परीक्षण गुगल द्वारा वर्णन गरिएको। यसको थप रूपमा, तपाइँले निम्न भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ:
E-A-T र यसको महत्त्वको बारेमा सिकिसकेपछि, तपाईंको सामग्रीले E-A-T अवधारणा अनुसरण गरेको छ वा छैन भनेर जान्न तपाईंलाई रुचि हुन सक्छ।
तलका उत्तरहरू खोज्नुहोस्:
YMYL शीर्षकहरूको बारेमा तपाइँको वेबसाइट मा सामग्री छ?
उद्योग उद्योगले तपाईंको साइटमा सामग्री सिर्जना गरेको छ कि छैन?
तपाईंको साइटको सामग्री तथ्य-जाँच गर्नुहोस्। के यो सम्मानित र प्रसिद्ध स्रोतहरूबाट हो?
के तपाइँ नियमित रूपमा तपाइँको साइट को सामग्री अपडेट गर्नुहुन्छ?
के तपाईंको साइटमा आगन्तुकहरूले सामग्री बहुमूल्य पाउनेछन् र यसलाई विश्वास गर्दछन्?
के तपाइँको साइट सुरक्षित छ?
के तपाईंको साइटमा "बारेमा" र "सम्पर्क" पृष्ठहरू छन्?
यदि त्यहाँ तपाइँको साइट मा लेख वा ब्लग छन्, के ती अन्तमा "लेखकको बायो" समावेश गर्दछ?
यदि तपाईं यी प्रश्नहरूको जवाफ पाउन सक्नुहुनेछ र, ती आधारमा, आवश्यक परिवर्तनहरू गर्नुहोस्, गुगलले तपाईंको साइटलाई मूल्यवान्‌ ठान्नेछ र खोजी परिणामहरूमा यसलाई उच्च श्रेणी दिनेछ।
जहाँसम्म, यदि तपाइँको सामग्री E-A-T अवधारणा अनुरूप छ भने पत्ता लगाउन त्यहाँ सजिलो तरीका पनि छ। यो भाडामा छ वेबसाइट एनालिटिक्स Semalt बाट सेवाहरू।
जब तपाईं स्व-विश्लेषण माथि व्यावसायिक सेवाहरूको लागि जानुहुन्छ, तपाईं केवल उत्तम सिफारिसहरू मात्र आशा गर्न सक्नुहुनेछ। आत्म-विश्लेषण को मामला मा, तपाईं केहि याद गर्न सक्नुहुन्छ।
जब उद्योगका विज्ञहरूले तपाईंको सामग्री धेरै प्यारामिटरहरूमा विश्लेषण गर्दछन्, केही हराएको सम्भावना हराउँछ।
अब तपाईले E-A-T, यसको महत्व र SEO संग यसको सम्बन्ध बुझ्नु भएको छ। E-A-T प्रदर्शन गर्ने तरिकाहरू बुझ्ने समय आएको छ ताकि गुगलको आँखामा वेबसाइट मूल्यवान बन्न पुग्छ, र यसको खोजी क्रमशः अन्तत: सुधार हुन्छ।
बाट विशेषज्ञहरु Semalt धेरै तरिकाहरू सुझाव दिनुहोस्। यहाँ तिनीहरू मध्ये केही छन्:
सामग्री अपडेट राख्नुहोस्
E-A-T को प्रदर्शनको लागि नियमित रूपमा सामग्री अपडेट गर्नु महत्वपूर्ण छ। र, यो YMYL साइटहरूको मामलामा आवश्यक हुन्छ।
यसको मतलब यो हो कि यदि सामग्री कानूनी, वित्तीय, चिकित्सा, स्वास्थ्य, कर, वा कुनै अन्य YMYL- सम्बन्धित विषयको बारेमा छ भने, यसलाई सम्पादन, अपडेट र नियमित समीक्षा गर्नुपर्छ।
यसका अतिरिक्त, यस्तो प्रकारको सामग्री पेशेवर स्रोतहरूबाट आउनुपर्दछ वा पेशेवर शैलीमा प्रस्तुत हुनुपर्दछ।
यदि सामग्री गैर YMYL शीर्षकहरूमा छ भने, तब नियमित अपडेट पनि आवश्यक छ। क्वालिटी रेटर दिशानिर्देशहरू (QRGs) ले यसको बारेमा केहि पनि खुलाएको छैन, तर Semalt विशेषज्ञहरु विश्वास गर्छन् कि यो अझै महत्वपूर्ण छ।
मिति सकिएको सामग्री भएको वेबसाइट वा वेबपृष्ठले कसरी प्रयोगकर्ताको विश्वास पाउन सक्छ?
तथ्यहरू मूल्या .्कन गर्नुहोस्
गुगलबाट क्वालिटी रेटर दिशानिर्देशहरू (QRGs) अनुसार, समाचार लेखहरू, वैज्ञानिक पोष्टहरू, र अन्य सम्बन्धित सामग्री तथ्यात्मक रूपमा सहि हुनुपर्दछ। यो भरपर्दो स्रोतबाट आउनुपर्दछ र उपयुक्त समुदायको साथ जानुपर्दछ।
उदाहरण को लागी, एक वेबसाइट मा समाचार लेखहरु पत्रकारिता पेशेवर हुनु पर्छ, र वैज्ञानिक पोष्टहरु संगठन वा वैज्ञानिक विशेषज्ञता भएका मानिसहरुबाट हुनुपर्दछ।
यसको मतलब यो होइन कि तपाइँ गैर YMYL सामग्री को लागी तथ्यहरु बेवास्ता गर्नु पर्छ। तपाईंले स्रोतहरू गुगलले विश्वासयोग्य फेला पार्दछ, जस्तै विकिपेडिया र अन्यहरूमा सामग्री फेला पार्नु पर्छ।
जब यो प्रतिष्ठा निर्माणको कुरा आउँछ, अनलाइन समीक्षा ठूलो मद्दत हो। तिनीहरूले वेबसाइट, उत्पादन, सेवा, वा व्यापारको बारेमा सकारात्मक वा नकारात्मक जानकारी प्रकट गर्दछ। र यसले अधिकार र विश्वासमा डोर्‍याउँछ।
धेरै व्यक्तिहरूले यसलाई गलत बुझ्छन् र केवल एउटा समीक्षा साइटमा ध्यान केन्द्रित गर्दछ - बीबीबी (उत्तम व्यापार ब्यूरो)। तर, BBB बाट रेटिंग्स सकारात्मक वा नकारात्मक प्रतिष्ठाको अन्तिम प्यारामिटर होइन।
वेबसाइट मालिक वा व्यवसायहरूले केहि वजन लिने साइटहरूबाट बढी सकारात्मक समीक्षाहरू प्राप्त गर्नुपर्दछ। ती साइटहरू हुन सक्छन् तपाईंको उद्योगबाट, मानिसहरूले प्रयोग गरेको र विश्वास गरिएको।
तपाइँको विश्वसनीयता प्रदर्शन गर्नुहोस्
तपाईं ई-ए-टी प्रदर्शन गर्न सक्नुहुन्छ गुगलमा तपाईंको विश्वसनीयता प्रदर्शन गरेर। मान्नुहोस् कि तपाईं उच्च योग्य हुनुहुन्छ वा तपाईंको उद्योगको बारेमा प्रतिष्ठित पुरस्कारहरूका विजेता हुनुहुन्छ, यसलाई तपाईंको साइटमा उल्लेख गर्नुहोस् र गुगल, साथै सम्पूर्ण विश्वलाई यो जान्नुहोस्।
तपाईको विश्वसनीयता प्रदर्शन गर्ने दुई तरिकाहरू छन् - "लेखक बायो" र "बारेमा" वा "टीम" पृष्ठहरूमा। यसको पछाडिको उद्देश्य भनेको गुगललाई तपाईको विशेषज्ञता, आधिकारिकता, र विश्वव्यापीता (E-A-T) को बारेमा बताउनु हो।
भाडा विशेषज्ञ सेवाहरु
सबै उद्योगहरूमा विशेषज्ञ पूर्ण रूपमा काम समाप्त गर्नका लागि छन्। तपाइँ तपाइँको साइट E-A-T संगत बनाउन विशेषज्ञ सेवाहरू भाँडामा जान सक्नुहुन्छ। यदि तपाइँको वेबसाइट YMYL शीर्षक कभर, यो विज्ञ द्वारा तैयार सामग्री प्रकाशित गर्न अनिवार्य छ।
YMYL श्रेणी अन्तर्गत नरहेका शीर्षकहरूको लागि विशेषज्ञ सेवाहरू भाँडा लिन अनिवार्य छैन। तपाईं आफ्नो उद्योग मा अनुभव भएका व्यक्तिहरूको सेवाहरू भाँडामा लिन सक्नुहुन्छ। तपाईका शिर्षकहरुलाई तपाईको विषयहरुमा सम्बन्धित उच्च-गुणवत्ता सामग्री क्राफ्टिंगका लागि पनि जानिन्छ।
प्रत्येक वेबसाइट मालिकसँग विशेषज्ञ सेवाहरू भाँडा दिन बजेट छैन। त्यो अवस्थामा, गेस्ट पोष्ट समाधान हो। तपाइँ एक विशेषज्ञलाई तपाइँको वेबसाइट को लागी अतिथि पोष्ट लेख्न को लागी सोध्न सक्नुहुन्छ।
E-A-T को अवधारणा SEO को लागि महत्त्वपूर्ण छ। वेबसाइट मालिकहरूले निश्चित गर्नु पर्छ कि उनीहरूको साइटमा सामग्री विशेषज्ञता, आधिकारिकता, र विश्वव्यापी प्रतिबिम्बित गर्दछ। यदि वेबसाइटमा अधिक विषयहरू YMYL (तपाईंको पैसा वा तपाईंको जीवन) को वर्गमा सम्बन्धित छन् भने, E-A-T अवधारणा आवश्यक हुन्छ।
यो सबै होइन किनकि तपाईले गुगलमा E-A-T प्रदर्शन गर्न पनि आवश्यक पर्दछ। गुगललाई तपाईंको साइट बनाउँदै एएटको अवधारणालाई पछ्याउँदै यसको खोजी परिणामहरूमा पनि उच्च पार्दछ। ठीक यो गर्न, तपाईं विशेषज्ञ सेवाहरू भाँडामा लिन सक्नुहुन्छ र आराम गर्न सक्नुहुन्छ।